SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲပေါ်တူဂီဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲပေါ်တူဂီဝေငှ
﻿﻿ဤစာမျက်နှာကိုအတွက်သင့် browser ဘာသာစကား detect ပါလိမ့်မယ် 12 ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားမှာဘာသာစကားများနှင့် display ကို.
အင်္ဂလိပ် ဂျပန် ပြင်သစ် စပိန်
ဂျာမန် တရုတ် ကိုရီးယား အီတလီ
ဟီဘရူး ရုရှား Arabic အဘိဓါန် ပေါ်တူဂီ
သင့်ရဲ့အခမဲ့ activation software ကို download လုပ်ပါဖို့အောက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ ကျေးဇူးပြု. RescuePRO®:
1. အောက်တွင်, ရွေးချယ်မှုကူပွန်သင့်ရဲ့ SanDisk လွန်ကဲကဒ်နှင့်အတူလက်ခံရရှိ.
>>>>အဖျား: သင့်ရဲ့ကူပွန်RescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe ကိုပြောပြလိမ့်မယ်, အညီရှေးခယျြ.
**** သင်တစ်ဦးကူပွန် SSD ကိုRescuePRO®ရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ2. ကြေးဇူးပွုပွီး, သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ကူပွန်ဖို့အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ.3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့နံပါတ်စဉ်ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရရှိရန်မည်ကဲ့သို့အပေါ်သူ၏ညွှန်ကြားချက် RPRID.** စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ: အတူစတင်မယ့်အမှတ်စဉ်နံပါတ် RescuePro Deluxe များအတွက်ကူပွန်ရှိရမည် RPRID-0305,
ရန် SanDisk ဆက်သွယ်သင့် http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ မှန်ကန်သောနံပါတ်စဉ်များအတွက်.
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်နံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်.သင်သည်သင်၏နံပါတ်စဉ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် RPRID-0305 SanDisk တစ်ဦးပြည့်စုံကိုအစားထိုးလက်ခံရရှိရန်. **
© 2019 LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်,Inc မှ All Rights Reserved